सफल बन्न चाहानुहुन्छ ? विश्वले आदर्श व्यक्ति मान्ने अब्दुल कलामका यी ५ सुत्र फलो गर्नुहोस् – rastriyakhabar.com
काठमाडौं । भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वभरका मानिसहरुका लागि एक प्रेरणा दिने नाम हो । उनी मिसाइल म्यानको रूपमा प्रख्यात छन्, जुन आज पनि धेरै युवाहरूका लागि रोल मोडेल हुन् । कुनै कारणले जीवनबाट निराश भएका युवाहरुलाई उनका शब्दहरूले अझै पनि प्रत्येकको हृदय छाउछ ।
अब्दुल कलाम को हुन् ?
उनको पुरा नाम अवुल पकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम हो । उनको एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवारमा १५ अक्टोबर, १९३१, रामेश्वरम धनुषकोटि, तमिलनाडु, भारतमा जन्म भएको थियो । उनलाई सामान्यतया डाक्टर ए पी जे अब्दुल कलामका नामले चिन्ने गरिएको छ ।
डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय गणतन्त्रका ११ औँ निर्वाचित राष्ट्रपतिका रूपमा चिनिन्छन् । उनी भारतका पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक र अभियन्ता हुनाका साथै उनी अविवाहित पनि थिए । कलाम भारतको मिसायल कार्यक्रमको प्रमुख वास्तुकार पनि थिए ।
अब्दुल कलामको पिता जैनुलाब्दीन न त धेरै पढेलेखेका थिए, न त धेरै धनी नै थिए । उनी एक नाविक थिए र नियमका पक्क थिए । यिनको पिता मछुआराहरूलाई नाऊ भाडामा दिने गर्थे । अब्दुल कलाम सयुंक्त परिवारमा रहन्थे । परिवारको सदस्य संख्याको अनुमान यस प्रकार लगाउन सकिन्छ कि घर आफू सहित पाँच भाइ एवं पाँच बहिनी थिए र घरमा तीन परिवार रहने गर्थो । अब्दुल कलामका जीवनमा उनको पिताको धेरै प्रभाव रह्यो । उनका पिता पढे लेखेका न भए पनि उनले दिएको संस्कार अब्दुल कलामको जीवनमा धेरै काम आयो ।
पाँच वर्षको अवस्थामा रामेश्वरमका पञ्चायत प्राथमिक स्कूलमा तिनको दीक्षा–संस्कार भएको थियो । अब्दुल कलामले आफ्नो आरम्भिक शिक्षा नियमित राख्न लागि अखबार बेच्ने कार्य पनि गरेका थिए । कलामले सन् १९५८ मा मद्रास इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालजीदेखि अन्तरिक्ष विज्ञानमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरेका थिए । स्नातक गरिसके पछि उनले हावरक्राफ्ट परियोजनामा काम गर्नका लागि भारतीय रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संस्थानमा प्रवेश गरेका थिए ।
सन् १९६२ मा उनी भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठनमा आए जहाँ उनले सफलतापूर्वक धेरै उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाहरूमा आफ्नो भूमिका निभाएका थिए । परियोजना निर्देशकका रूपमा भारतका पहिला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एसलवी३का निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए जसदेखि जुलाई १९८० मा रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपित गरिएको थियो ।
डाक्टर अब्दुल कलाम भारतका ११ औ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । उनलाई भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलहरूले आफ्नो आशावार बनाएका थिए जसलाई वामदलहरूका अतिरिक्त समस्त दलहरूले समर्थन गरेका थिए । १८ जुलाई, २००२ मा डाक्टर कलामलाई नब्बे प्रतिशत बहुमत द्वारा ‘भारतको राष्ट्रपति’ चुनिएको थियो र उनले २५ जुलाई २००२ मा संसद भवनका अशोक कक्षमा राष्ट्रपति पदको शपथ लिएका थिए ।
यस संक्षिप्त समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी, र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्य तथा अधिकारीगण पनि उपस्थित थिए । अब्दुल कलामको कार्यकाल २५ जुलाई २००७ मा समाप्त भयो । डाक्टर अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिन्दगीमा अत्यन्त अनुशासनप्रिय थिए । उनी शाकाहारी र मद्यत्यागी थिए ।
उनले आफ्नो जीवनी ‘विङ्ग्स अफ फायद’ भारतीय युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तरिकाले लेखेका थिए । यिनको अर्को पुस्तक ‘गाइडिङ्ग सोल्स–डायलग्स अफ द पर्पज अफ लाईफ’ आत्मिक विचारहरूलाई उद्घाटित गर्दछ उनले तमिल भाषामा कविताहरु पनि लेखेका थिए ।
अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति होइनन् तर राष्ट्रवादी सोच र राष्ट्रपति बन्नुका पछि भारतको कल्याण सम्बन्धी नीतिहरूका कारण उनलाई केही हदसम्म राजनीतिक दृष्टिले सम्पन्न मान्न सकिन्छ । उनले आफ्नो पुस्तक ‘इण्डिया २०२०’ मा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेका थिए ।
उनी भारतलाई अन्तरिक्ष विज्ञानका क्षेत्रमा संसारको सिरमौर राष्ट्र बन्दै गरेको हेर्न चाहाना राख्थे र यसका लागि यिनको समक्ष एक कार्य योजना पनि थियो । उनले नै पहिलोपटक भारतलाई सुपर पावर बनाउने कुरा सोचेका थिए । यो विज्ञानका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्राविधिक विकास चाहेका थिए ।
डाक्टर कलामको भनाई छ कि ‘सफ्टवेयर’ को क्षेत्र सबै वर्जनाहरूदेखि मुक्त हुनुपर्दछ भने कि अधिकाधिक मानिस यसको उपयोगितादेखि लाभान्वित हुन सकुन् । यस्तोमा सूचना प्रविधीको तीव्र गतिदेखि विकास हुन सक्नेछ । त्यस्तो उनको विचार शान्ति र लडाँईलाई लिएर विवादास्पद पनि रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा उनले भनेका थिए, ‘२००० वर्षहरूका इतिहासमा भारतमा ६०० वर्षहरूसम्म अन्य मानिसहरूले शासन गरेका थिए, यदि तपाईँ विकास चाहनुहुन्छ भने देशमा शान्तिको स्थिति हुनु आवश्यक छ र शान्तिको स्थापना शक्तिदेखि हुन्छ । यसै कारण मिसाइलहरूलाई विकसित गरिएको कारण यही हो ताकि देश शक्ति सम्पन्न होस् ।’ उनको मृत्यु ८३ वर्षको उमेरमा २७ जुलाई २०१५ मा शिलाङ्ग, भारतमा भएको थियो ।